Mido Turbulent Woman Teacher Tennis lave Camp (mmsub)
by CHANNEL+ September 03, 2020
Mido Turbulent Woman Teacher Tennis
နာရှီရာမာ ဆိုတဲ့ တငျးနဈခြံပီယံဟောငျး မိနျးမခြောလေးဟာ အမြိုးသမီးသီးသနျ့ ကမျ့သှငျးလကေ့ငျြ့စခနျး ကို နညျးပွအဖွဈ အထကျက တာဝနျအရပေးပို့ခွငျး ခံလိုကျရပါတယျ...တဈခုရှိတာက အသမေောငျးတယျဆိုတဲ့ အရငျနညျးပွဟောငျး နဲ့
စတငျပွီး အကြိတျအနယျ ယှဉျပွိုငျရတာပဲ..နတော ကွာလလေေ တဈဖွေးဖွေးသိသာလာတာကတော့ ဒီကြောငျးမှာ လိငျမှုကိစ်စ ဆျောကားခံနရေတဲ့ ပွသနာကို သိလာပွီး ဆရာမ တဈယောကျ အနနေဲ့ ဖျောထုတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့သော အခါမှာတော့….
ဒီ ဆယျ့ရှဈပလပျ ကားလေးကို အားဆေးတှသေောကျ ကွကျဥတှေ အစိမျးစားပွီး ဘာသာပွနျပေးထားတာကတော့ Dark Knight ဖွဈပွီး XCode မှ ရတှေငေတျပွီး တငျဆကျပေးထားပါတယျ..Dark Side Fan အစဈတှေ ကတော့ ခကျြခငျြးကို Download ဆှဲပွီးကွညျ့တော့မယျဆိုတာသိနပေါပွီ….
Mido Turbulent Woman Teacher Tennis Slave Camp
နာရှီရာမာ ဆိုတဲ့ တင်းနစ်ချံပီယံဟောင်း မိန်းမချောလေးဟာ အမျိုးသမီးသီးသန့် ကမ့်သွင်းလေ့ကျင့်စခန်း ကို နည်းပြအဖြစ် အထက်က တာဝန်အရပေးပို့ခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်...တစ်ခုရှိတာက အသေမောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အရင်နည်းပြဟောင်း နဲ့
စတင်ပြီး အကျိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ရတာပဲ..နေတာ ကြာလေလေ တစ်ဖြေးဖြေးသိသာလာတာကတော့ ဒီကျောင်းမှာ လိင်မှုကိစ္စ ဆော်ကားခံနေရတဲ့ ပြသနာကို သိလာပြီး ဆရာမ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သော အခါမှာတော့….
ဒီ ဆယ့်ရှစ်ပလပ် ကားလေးကို အားဆေးတွေသောက် ကြက်ဥတွေ အစိမ်းစားပြီး ဘာသာပြန်ပေးထားတာကတော့ Dark Knight ဖြစ်ပြီး XCode မှ ရေတွေငတ်ပြီး တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်..Dark Side Fan အစစ်တွေ ကတော့ ချက်ချင်းကို Download ဆွဲပြီးကြည့်တော့မယ်ဆိုတာသိနေပါပြီ….
Link - https://mkvlinks.xyz/0PPb7